प्रेम, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र यौनसम्बन्ध – Everest Dainik – News from Nepal
प्रेम, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र यौनसम्बन्ध
२०७४, १० श्रावण मंगलवार
पछिल्लो समयमा सम्बन्ध विच्छेद हुने संख्या झनै बढेको छ । प्रेम विवाहमा सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना र अवस्था बढी देखिने भएपनि मागी विवाहमा समेत श्रीमान श्रीमती छुट्टिने क्रम बढिरहेको छ ।
प्रेम गरेको मानिससँग बिहा गरेपछि पनि किन सम्बन्धविच्छेद हुन्छ त ? भन्ने बारेमा धेरै तर्कहरु सुन्न सकिन्छ । तर यो लेखको आशय त्यसबारेमा चर्चा गर्ने भने होइन । बरु सम्बन्ध विच्छेदपछिको यौन सम्बन्धका बारेमा यहाँ लेख्न खोजिएको हो ।
काभ्रेको घटनामा सम्बन्ध विच्छेदपछि श्रीमान, श्रीमती सँगै सुतेको आशंका भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । यद्यपी यसको औपचारिक पुष्टि भने प्रहरीले गरेको छैन ।
सम्बन्धविच्छेदको चरणमा एउटा जटिल मानसिक अवस्थाको सामना दुबैले गर्नु परेको हुन्छ । त्यसपछि भने केहीले फेरी नयाँ सम्बन्ध बनाउँछन्, केहीले बनाउँदैनन् । नयाँ सम्बन्ध भएको बेला त्यहाँ हुने यौनसम्बन्ध विगतको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नका बारेमा हफिङ्टन पोष्टमा एउटा आलेख प्रकाशित भएको थियो । उक्त आलेखका अनुसार, सम्बन्धविच्छेद पछिको सेक्स झनै आनन्ददायी हुन्छ रे । पढौं एकजना महिलाले आफ्नो अनुभवसहित लेखेको उक्त आलेखको सम्पादित अनुदित अंश
प्रेम अनि विवाह
मैले प्रेम विवाह गरे । शुरुका दिनमा हामीहरु निकै उत्साहित थियौं । जीवनका नयाँ सपना बुनेका थियौं । प्रेमको चरणमा र बिहे गरेको एकदुई वर्षसम्म हामीबीचको यो आकर्षण कायम भयो । यही बीच हाम्रो घरमा छोरी जन्मिईन । छोरी जन्मिएपछि मैले बढी समय छोरीलाई दिन थालिन । सेक्स भन्ने कुरा त हुने भएन ।
नानी ४, ५ महिना पुगेपछि यौनसम्बन्ध राखियो । तर त्यो यौनसम्बन्धमा पुरानो उर्जा र उत्साह थिएन । यो एउटा रुटिन जस्तै हुन थाल्यो । राखे पनि फरक नपर्ने, नराखे नि ठीकै छ जस्तो ।
प्रेमको संसारमा र विहेपछिको सुरुआती दिनमा हामीबीच व्यवहारिक जीवनका कुराहरु कमै ठोक्किन्थे । त्यतिखेरका सबै समस्याहरु समेत हामीले त्यति वास्ता गर्दैनथ्यौं । तर यो आकर्षणको चरण समाप्त हुन थाल्यो । अब सानासाना कुरामा हामीबीच विवाद हुन थाल्यो । जस्तो मोजा खोलेर कहाँ राख्ने, पाइन्ट पट्टयाउने कुरा, भान्सामा कफी बनाउने कुरामा समेत झगडा हुने अवस्था हुन थाल्यो । फोनमा कोसँग कुरा भयो, फेसबुकमा फलानोलाई किन साथी बनाएको जस्तो कुरामा समेत झगडा हुन थाले । कतिपय अवस्थामा त कुरा केही पनि नहुने तर पनि दुबैबीच मनमुटाव । पैसाको कमी थिएन । मैले छोरी हेर्थेँ र उनले कमाउँथे । तर न उनी सन्तुष्ट थिए यता मलाई आफू थन्किएकोमा चिन्ता लाग्थ्यो । आकर्षण भन्ने कुरा बिस्तारै औपचारिकतामा जान थाल्यो । मैले धेरै कोशिस गरे आफूमा पुरानो प्रेमिल भावना सिर्जना गर्न । तर एकपछि अर्को व्यवहारिक कुरा आइपर्दा हामीबीच भावनात्मक लगावले दीर्घता लिन सकेन । हामी श्रीमान श्रीमती थियौं, छोरी थिइन । र, पनि हामी भावनात्मकरुपमा एक्लो थियौं । माया पनि गथ्र्यौं कता कता एक अर्कालाई तर त्यो विवाह अघि जस्तो आशक्तिको रुपमा थिएन ।
मलाई म ठीक छु, लाग्थ्यो, उनलाई उनी ठीक । यसो तार्किक ढंगले सोच्दा दुबै आफ्नो स्थानमा ठीक पनि भएको तर हाम्रो बाँच्ने र सोच्नै शैली र तरिका नै फरक भएको निश्कर्षमा पुग्थेँ । र, यो क्रम बढ्दै गएपछि सम्बन्ध विच्छेद गरियो ।
सम्बन्ध विच्छेदपछिको सेक्स
सम्बन्ध विच्छेदपछि मेरो मनमा बिहा गर्ने सोच आएन । माया गरेको मान्छेले त आफूलाई बुझेन, अरुले के गर्ला र ? भन्ने लाग्थ्यो ।
तर मानिसले सोचेजस्तो हुने रहेनछ । केही समयपछि कामको सिलसिलामा कतै गएको बेला मेरो एकजना पुरुषसँग यौनसम्बन्ध भयो । यो कुनै सोचिएर या मनले पूर्व योजना बनाएर गरिएको यौन सम्बन्ध थिएन । परिस्थिति त्यस्तै थियो । यो आकस्मिक यौनसम्बन्ध थियो ।
फरक के हुँदो रहेछ ?
एकजनासँग मात्रै ५ वर्षसम्म यौनसम्पर्क भइरहेको थियो मेरो । एउटा रुटिन जस्तो । उनी आउँथे, आफ्नो इच्छा पुरा गर्थे र जान्थे । तर यहाँ केही नयाँ थियो । नयाँपन, फरक शैली, नयाँ भावना ।
अर्कोतर्फ कता कता म भित्र पनि उर्जा भएको र भावना बाँकी रहेको यसले अनुभूति दिलायो । सम्बन्ध विच्छेदपछि म टुटिसकेकी थिएँ एक अर्थमा । उर्जा नै थिएन । तर यो आकस्मिक यौनसम्बन्धमा उक्त युवकले मभित्रको उर्जालाई मानसिकरुपमा प्रष्पुटित गर्यो । मेरो पछिल्लो वैवाहिक जीवनमा श्रीमानले मेरो प्रशंसा कहिल्यै गरेनन् । म जहिले पनि सेक्स नै नरुचाउने युवतीका रुपमा भन्थे उनले । तर यो युवकले मलाई म सेक्सी भएको, सुन्दर भएको कुरा गर्दा फरक अनुभूति भयो ।
अर्कोतर्फ म अनुभवी थिए । सेक्समा कतिपखेर पुरुषले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराको अनुभव थियो । मसँग यौनसम्बन्ध राख्ने युवक भने नयाँ थिए । यसले उक्त यौनसम्बन्धमा मेरो अवस्था बलियो थियो । मैले नियन्त्रण गर्न सक्थेँ । महिलाले यौनलाई आफूखुसी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा उसको आत्मउर्जा बलियो हुने रहेछ । वैवाहिक जीवनमा यो सम्भव थिएन । कतिपय अवस्थामा मैले पोजिसन परिवर्तन गर्न खोज्दा समेत झगडा हुने गथ्र्यो । तर यहाँ त्यो भएन ।
यहाँ स्वतन्त्रता थियो, मलाई भोली कसैले केही भन्ला भन्ने डर थिएन, त्रास थिएन । न त मैले सेक्स गरेको भोलीपल्ट श्रीमानको कट्टु धुनुपर्ने, सेक्स गरेको एक घण्टामा कफी ल्याइदिनैपर्ने रुटिन निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । ती युवक भेटिए, एउटा खास अवस्थामा शारीरिक सम्पर्क भयो र हामी छुट्टियौं । त्यहाँ कुनै बाध्यता रहेन ।
सम्बन्ध विच्छेदपछि पुरुषहरुका लागि सजिलो छ, उनीहरुले जतिखेर पनि जोसँग सम्बन्ध राख्न सक्छन् । तर महिलाहरुका लागि भने गारो छ । एकातिर हामी मानसिकरुपमा नै पीडित हुन्छौं । मानसिक दबाब निकै हुन्छ । अर्कोतर्फ नयाँ विवाह गरेपनि त्यो खालको आत्मसम्मान पाईदैन । मान्छेको मन हो, यौन इच्छा पनि हुन्छन् । तर यो पनि हामी गर्न पाउँदैनौं । त्यसले गर्दा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरु आफैलाई पल पलमा मारिरहेका हुन्छन् ।
मैले सम्बन्धविच्छेदपछि गरेको यौनसम्बन्धपछि के लाग्यो भने महिलाहरुले आफूलाई मार्नु आवश्यक छैन । कुनै भावनात्मक या अन्य प्रकारको नियन्त्रण नहुने गरी यौनसम्बन्ध राख्दा फरक पर्दैन । मुख्य कुरा आफ्नो शरीर र मन हो । यसलाई राम्रो हुन्छ, मन, विचार मिल्छ भने ‘गो अहेड’
यो मेरो विचार हो, यसमा तपाईहरुको फरक मत पनि हुन सक्छ ।
केली विलियमले लेखेकाे याे अालेख अनुवाद गरिएकाे हाे
ट्याग्स: Love marriage divorce and sex